DHAGEYSO:Madaxweynaha oo 5 isbitaal xariga kaga jaray Nairobi | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Madaxweynaha oo 5 isbitaal xariga kaga jaray Nairobi
DHAGEYSO:Madaxweynaha oo 5 isbitaal xariga kaga jaray Nairobi
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa xalay si rasmi ah u furay xarumo caafimaad oo shan ah.
Maamulka ay dowladda dhexe u xilsaartay bixinta adeegyada shacabka ee Nairobi ee NMS ayuu hoggaamiyaha wadanka ku amray inuu xaqiijiyo in isbitaalladan ay shaqeynayaan 24-ka saacadood.
Xarumahan ayaa qayb ka ah 24 uu maamulka NMS ka hirgelinayo magaala madaxda dalka.
Dowladda dhexe ayaa wado qorsho lagu yareynaya tirada bukaanka ee daryeelka caafimaad u raadsado isbitaallada Kenyatta ,Mama Lucy, Pumwani iyo Mbagathi .
Madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee State House ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in furitaanka isbitaallada ay madaxweynah ku qaadatay muddo afar saacadood ah .
Waxay xarumahan kala yihiin labo ah heerka labaad oo lagu kala magacaabo Gichagi oo ku yaalla xaafadda Kangemi iyo Gatina oo laga dhisay xaafadda Kawangware iyo saddex kale oo ah heerka level 3.
Mr. Kenyatta oo ay wehelinayeen agaasimaha guud ee maamulka NMS Maxamad Badi iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan dowladda dhexe ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in dadweynaha ay adeegyo caafimaad oo tayo leh ka helaan meesha ugu dhow.
Madaxweynaha ayaa sababta uu xilli habeen ah isbitaallada u furay ku sheegay inuu u hoggaansamayo xeerarka lagu xakameynaya faafidda cudurka COVID19 oo ay ka mid tahay in dad badan aynan hal meel isugu tagin.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay ka war heleen in qaar ka mid ah isbitaallada dowladda ee Nairobi la xiro xilli hore taasoo ay u kuurgalayeen.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay in dhawaan la sameystiri doono isbitaallo laga dhisaya xaafadaha isku raranta ah ee Nairobi.
Xilli uu ka hadlayay baahida ay shacabka u qabeen xarumaha caafimaadka ee uu xalay daahfuray ayuu madaxweynaha dalka yiri.
Previous articleMilitariga Colombia oo lagu eedeyay inay dileen in ka badan 120 qof oo shacab ah
Next articleWasiirka caafimaadka oo baaq u diray ismaamullada